ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီအတွက် အရေးပါသောရင်းမြစ်နှစ်ခုရှိ၍ ၎င်းတို့ကို ကိုဂျိကိ(Kojiki) နှင့် နိဟွန် ရှိုကိ(Nihon Shoki) ဟူ၍အသိအမှတ်ပြုထားသည်။ ကိုဂျိကိ (သို့) 'ရှေးခေတ်အကြောင်းအရာများမှတ်တမ်း'သည် ဂျပန် ဒဏ္ဍာရီ၊ ရာဇဝင်၊ သမိုင်းများ၏ ရှင်သန်လျှက်ရှိသော သက်တမ်းအရင့်ဆုံး မှတ်တမ်းကြောင်းရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထပ်မံ၍ ရှင်တိုရှူ(Shintōshū) စာပေကလည်း ဗုဒ္ဓဘာသာရှုထောင့်မှ ဂျပန်နတ်ဒေဝါများ၏ ဇာစ်မြစ်များကို ဖော်ပြထားသည်။
ဂျပန်နှင့် ကာမီတို့၏ မူလဇာစ်မြစ်များပြင်ဆင်
ကူနီယူမီ နှင့် ကာမီယူမီပြင်ဆင်
အီဇာနာမီသေဆုံးပြီးနောက် သူမကို ယိုမီ (ပရလောက) မှ ကယ်တင်ရန် အီဇာနာဂီ၏ ကြိုးပမ်းမှု ဒဏ္ဍာရီပိုင်းသည် မွေးဖွား၊ သေဆုံးသည့် ဘဝသံသရာကို ရှင်းလင်းပြသထား၏ ။ ၎င်းတို့၏ကလေး ကာဂူဆူချီကို သတ်ပစ်ပြီးနောက် အီဇာနာဂီသည်သည် ပရိဒေဝတောက်လောင်ကာ ဇနီးသည် အီဇာနာမီကို ပရလောကမှ ကယ်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းရှာဖွေသည့် လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ သူမကိုရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် အီဇာနာဂီသည် သူမက ယိုမီမှ ထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုနေစဉ် သူမအား နောက်လှည်မကြည့်ရန် တောင်းဆိုမှုပြသည်ကို မလိုက်နာဘဲ ချိုးဖောက်မိသည်။ အီဇာနာဂီက ၎င်း၏ဆံပင်ကိုသုံး၍ မီးတောက်ဖန်တီးလေသည်။ ထို့နောက် အီဇာနာမီ၏ ပုတ်သိုး လောက်တက်နေသော အသားစများကိုမြင်သော် ကြောက်လန့်ရွံရှာ၍ ထွက်ပြေးသည်။ အီဇာနာမီမှာ သစ္စာဖောက်သကဲ့သို့ ခံစားရကာ ၎င်းကို အမိဖမ်းရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော် အီဇာနာမီလွှတ်လိုက်သော ကုန်းမအို( ရုပ်ဆိုးကျဉ်းတန်သော မိန်းမအို) တစ်သိုက်အတွက် မက်မွန်သီးပြခြိမ်းချောက်ခြင်းအပါအဝင် အတားအဆီးများပြု၍ ထွက်ပြေးနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ယိုမီထဲသို့သွားသောခရီးစဉ် ဒဏ္ဍာရီတွင် များစွာသော အစားအစာများပါဝင်၍ ကုန်းမအိုတစ်သိုက်အား စိတ်ဝေဝါးစေရန်နှင့် ၎င်းထွက်ပြေးစဉ် အချိန်ပိုရစေရန် စပျစ်သီးများဖန်ဆင်းသည်။ ကုန်းမအိုများကို ခြိမ်းခြောက်ရန်အလို့ငှာ အသုံးပြုသော မက်မွန်သီးသည် မြင့်မြတ်မှုသဘောဆောင်ကာ အခြားများစွာသော ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီများ၌လည်းပါဝင်လေရာ အထူးသဖြင့် မိုမိုတာရို ခေါ် မက်မွန်ကောင်လေး ဇာတ်လမ်းပုံပြင်တွင်ဖြစ်သည်။
နေ၊ လနှင့် မုန်တိုင်းပြင်ဆင်
အီဇာနာဂီ၏ ယိုမီလောကမှအပြန် ခရီးတစ်လျှောက် ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီတွင် နေနှင့်လတို့၏ မူလဇာစ်မြစ်များကို ဖော်ပြထားသည်။ ယိုမီ၌အချိန်များစွာကြာပြီးနောက် အီဇာနာဂီသည် သန့်စင်ခြင်းပွဲ။ မိမိကိုယ်ကို သန့်စင်စေသည်။ အီဇာနာဂီသည် ထိုသို့သန့်စင်ခြင်းအမှုပြုရာတွင် ၎င်းကိုယ်မှ ကျလာသော ရေနှင့် ဝတ်ရုံများသည် အခြားနတ်များစွာကို ပေါက်ဖွားစေသည်။ သန့်စင်ခြင်းဓလေ့ထုံးတမ်းသည် အိမ်များ၌ ဖိနပ်စီးသည့်ကျင့်ဝတ်မှသည် ဆူမိုနပမ်း သန့်စင်ခြင်းဆိုင်ရာအခမ်းအနားအထိ ဂျပန်နိုင်ငံတွင် ယခုထိအရေးကြီးသော ဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုဖြစ်လျှက်ရှိသည်။ နေနတ်ဘုရားမ အမတဲရာစုနှင့် မြင့်မြတ်သော ရှေးဘိုးဘေးဖြစ်သည့် ပထမဆုံးသော ဧကရာဇ် ဂျင်မူးသည် အီဇာနာဂီ၏မျက်လုံးမှမွေးဖွားခဲ့သည်။ လနတ်ဘုရားနှင့် မုန်တိုင်းနတ်ဘုရား ဆူဆာနိုအိုတို့သည်လ အီဇာနာဂီ မျက်နှာသစ်သောအခါ မွေးဖွားခဲ့သဖြင့် အမတဲရာစုတို့နှင့် တစ်ချိန်တည်းမွေးဖွားသည်ဟု ဆိုနိုင်သည်။
နေ၊ လ၊ မုန်တိုင်နတ်ဘုရားများအကြောင်း ဆက်စပ်ဖော်ပြထားသော ဒဏ္ဍာရီများသည် ပဋိပက္ခအပြည့်ဖြင့် ဖြစ်လေသည်။ နေနတ်ဘုရားမနှင့် မောင်နှမတော်စပ်သူ လနတ်ဘုရားတို့၏ အချင်းချင်းဖြစ်သော ပဋိပက္ခများသည် ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီ၌ နေနှင့်လတို့ ကောင်းကင်တွင် တစ်ချိန်တည်းတည်ရှိမနေခြင်းအကြောင်းကို ရှင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အမြင်အကြည် မနှစ်မြို့မီုများက တစ်ဦးရှိလျှင် နောက်တစ်ဦးကို ရှောင်ခွာစေသည်။ ထိုစဉ်အတွင်း နေနတ်ဘုရားမနှင့် မုန်တိုင်းနတ်ဘုရားတို့၏ ပြဿနာများနးမှာ ပြင်းထန်ကာ သွေးထွက်သံယိုဖြစ်သည်အထိပင်ဖြစ်သည်။ မုန်တိုင်းနတ်ဘုရား ဆူဆာနိုအို၏ အမတဲရာစု အိမ်တော်၌ ဒေါသပုန်ထခြင်းကို တင်ပြသောများစွာသော ဖော်ပြချက်များက မနှစ်မြို့ဖွယ်ရာ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော အပြုအမူများကို ဖော်ပြထားသည်။ ထိုသို့ ဖော်ပြထားသော ဒဏ္ဍာရီများတွင် ဆူဆာနိုအို၏ အပြုအမူများသည် အမရာတဲဆုက်ု ကြောက်လန့်စေ၍ ဂူတစ်ခု၌ ပုန်းအောင်းခိုဝင်နေစေသည်။ အမတဲရာစုကို ဂူမှပြန်လည်ထွက်လာစေရန် ကြိုးပမ်းမှု၌ နတ်များစွာ၏ ကြိုးပမ်းမှုဖြစ်ကာ လိင်စိတ်နိုးကြွစေသော အကတစ်မျိုးကို အေမီ နို ယူဇူမီက ကပြခဲ့သည်။ အေမီ နို ယူဇူမီသည် သူမကိုယ်သူမ ဖော်ချွတ်ကပြ၍ ကသောင်းကနင်းဆူဆူပူပူအခြေအနေတစ်ခုကိုဖန်တီးခဲ့ရာ အမတဲရာစုက ဂူအတွင်းမှ ချောင်းကြည့်ခဲ့၏ ။ ဤသို့ အမတဲရာစု၏ ဂူအဝတွင် ဝင်လိုက် ပေါ်လာလိုက်ဖြစ်နေသည်ကို ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီ၌ အမွှန်းတင်သော ရုပ်ပုံတစ်ပုံအဖြစ် ချယ်မှုန်းကြသည်။ ညာဘက်တွင် ပြသထားသည်။
ပထမဆုံးဧကရာဇ် ဂျင်မူး၏ ဇာတ်လမ်းကို တော်ဝင်မိသားစု၏ မူလဇာစ်မြစ်အဖြစ်ယူဆနိုင်သည်။ ဧကရာဇ် ဂျင်မူးသည် နေနတ်ဘုရားမ အမတဲရာစုမှ ဆင်းသက်လာသူဟူ၍ ယုံကြည်ယူဆ၏ ။ ၎င်း၏နန်းတက်ခြင်းကိုလည်း နတ်ဘုရားတို့ခေတ်မှ လူသားခေတ် အကူးအပြောင်းအဖြစ် အမှတ်သညာပြုကြသည်။ ယာမာတိုခရိုင်ကို သိမ်းပိုက်အုပ်ချုပ်ပြီးနောက် တော်ဝင်ထီးနန်းကိုတည်ထောင်ကာ ကာနိုတို တိုရီခေတ် (ရိုးရာအားဖြင့် ၆၆၀ ဘီစီ) တွင်နန်းတက်ခဲ့သည်။
ဤဒဏ္ဍာရီ၏ အရေးပါမှုသည် အထူးသဖြင့် ဤသို့ဖြစ်၏ ။ ယခုဒဏ္ဍာရီသည် ဂျပန်တော်ဝင်မင်းဆက်မိသားစု၏ ဇာစ်မြစ်၊ ၎င်းတို့၏ အာဏာနှင့် မြင့်မြတ်သောနတ်ဘုရား အရည်အသွေးရှိသည်ဟူ၍ ဖော်ပြခြင်းဖြစ်သည်။ အချို့သောပညာရှင်များက နီဟွန် ရှိုကိ နှင့် ကိုဂျိကိတွင် တွေ့ရသော ဒဏ္ဍာရီများသည် ထိုတော်ဝင်မိသားစုကို အခွင့်အာဏာများပေးသည် အဓိပ္ပာယ်ဟု ယုံကြည်ကြသော်လည်း အခြားပညာရှင်များက ထိုရင်းမြစ်နှစ်ခု၌ပါရှိသော အကြောင်းအရာများသည် တူမတူသည့်ဖော်ပြချက်များဖြစ်၍ ဒဏ္ဍာရီသမိုငါးများကိုသာ အခွင့်အာဏာပေးသည်ဟုလည်း ရည်ညွှန်းဖော်ပြကြသည်။ ဂျပန်၏ ဒဏ္ဍာရီဆန်သောသမိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ထိုရင်းမြစ်နှစ်ခုတွင် အမျိုးမျိုးသော ဖော်ပြချက်အကြောင်းများပါရှိကာ ထိုစာပေနှစ်ခာကြား၌ တော်ဝင်မင်းဆက်မိသားစု ဇာစ်မြစ်နှင့်ပတ်သက်သော အသေးစိတ်ကြောင်းရာများတွင် ကွာခြားမှုများပါရှိသည်။  ယာမာတိုမင်းဆက်သည် လက်ရှိဂျပန်နိုင်ငံ၏ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ယခုထိတိုင် တိုင်းပြည်နှင့် ပြည်သူတို့၏ အရေးပါသော လူထုအမှတ်လက္ခဏာအဖြစ် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုက်ု ပိုင်ဆိုင်ထားသည်။
ကာမီဟုအမည်တွင်သည့် ဂျပန်နတ်ဘုရား/မ အပေါင်းတို့သည် မြောက်များစွာရှိကြ၍ စွမ်းအားရှိမှု၊ အရေးပါမှုအနေထားမှာလည်း အမျိုးမျိုးအဖုံဖုံဖြစ်ကြသည်။ နတ်အပေါင်းမှာ အနည်းဆုံး ရှစ်သန်းခန့်ရှိသည်ဟု ဆိုသည်။ ကာမီများ ကမ္ဘာလောကကို ပုံဖော်ခြင်းမပြုမီ လောကအစ ဆီ၏ နတ္ထိသဘောမှ မွေးဖွားလာသည့် သုံးဘုရားတစ်ဆူနတ်ဘုရားမှ ဆင်းသက်လာကြသည်။ ထင်ရှားသော သဘာဝတရား၏ လက္ခဏာများရှိသလောက် ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီ နတ်ဘုရားများမှာလည်း များပြားလှသည်။ အများစုမှာ သဘာဝတရား၏ ဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဆက်စပ်လျှက်ရှိသည်။ ကာမီများသည် များစွာသော အသွင်သဏ္ဌာန်၊ ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြစ်၍ ရှေး​ဟောင်းသုတေသီများတွေ့ရှိခဲ့သော အနုပညာဖော်ပြချက်၊ ရေးဆွဲချက်များတွင် အချို့မှာ လူသားကဲ့သို့ပုံစံရှိသည်။ အချို့သော ကာမီနတ်များမှာ လူတစ်ပိုင်း သတ္တဝါတစ်ပိုင်းပုံပန်းရှိ၍ အချို့အချို့မှာ လူနှင့် လုံးလုံးလျှားလျှားမတူချေ။ ဖော်ပြရေးဆွဲချက်များတွင် လူနှင့်တူသည့် ကာမီနတ်တစ်ပါးနှင့်ပတ်သက်သော ဥပမာတစ်ခုမှာ ပင်လယ်ပြင်ကိုအုပ်စိုးသည့် နတ်နဂါး (Ryūjin) ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူကား နင်ဂီ နှင့် အမတဲရာစု ကဲ့သို့သော ကာမီနတ်များကို လူသားအသွင်ဖြင့်သာ များသောအားဖြင့် ရေးဆွဲဖော်ပြကြသည်။
သူရဲကောင်းများနှင့်ပတ်သက်သော ရိုးရာဇာတ်လမ်းပုံပြင်များတွင် ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာ သင်ခန်းစာများ (သို့) ဇာတကကဲ့သို့သော ပုံပြင်များပါရှိသည်။ ရှီတာ-ကီရီ-စုဇူမီဇာတ်လမ်းသည် ဝိသမလောဘ၊ မစ္ဆရိယစိတ်များ၏ အန္တရာယ်ကို သတိပေးဆုံးမထားသည်။ ပုံပြင်မှာ စာငှက်အဖြစ်အသွင်ပြောင်းထားသော နတ်သမီးက အအသက်ရွယ်ကြီးရင့်သောလင်မယားမှ အဘိုးအို၏ စိတ်ဓာတ်ကို စမ်းသပ်ခြင်းပုံ ဖြစ်သည်။ ဘူရှီဒို (သူရဲကောင်း (သို့) ဆာမူရိုင်းတို့ လမ်းစဉ်) ၏ လွှမ်းမိုးနိုင်မှုသည် သူရဲကောင်းများ၏ အပြုအမူများပေါ်တွင် အတော်လေးသိသာထင်ရှား၏ ။ သူရဲကောငါးများမီာ များသောအားဖြင့် စစ်သည်တော်များဖြစ်ကြသည်။ မိုမိုတာရိုသည် မက်မွန်ပင်မှ မွေးဖွားလာ၍ သားသမီးမဲ့သော ဇနီးမောင်နှံ၏ ပြုစုမှုဖြင့် ကြီးပြင်းလာသောသူဖြစ်သည်။ ခရီးစဉ်တစ်ခုတွင် ၎င်းနေထိုင်ရာကျွန်း၌ ပြန်ပေးစွဲ၊ ဓားပြတိုက်၊ မဒိန်းကျင့်သည့် ဘီလူးတစ်ကောင် အိုနီကို တိုက်ခိုက်အနိုင်ယူ၍ တာဝန်ကျေပွန်သော သတ္တိရှိသော ဒဏ္ဍာရီလာ သူရဲကောင်းဖြစ်လာခဲ့သည်။ မိုမိုတာရိုဇာတ်လမ်းသည် ကြမ်းတမ်းခြင်း၊ အတင်းအဓမ္မ မဖွယ်မရာပြုကျင့်ခြင်းမျာူ၊ လူသားများကို စားသော နတ်များ စသည့်အကြောင်းများပါဝင်သည်။ အတင်းအဓမ္မ မဖွယ်မရာပြုကျင့်ခြင်းဌာတ်လမ်းများသည် ဂျပန်ဗုဒ ဓဘာသာစာပေ Nihon Ryōiki တွင်များစွာပါဝင်၍ တောင်သောင့်နတ်များမှ လူသားများအား စားသောက်ခြင်းအကြောင်းအရာများကို ဖူဒိုကိစာပေတွင် တွေ့ရသည်။ ဂျပန်ရိုးရာပုံပြင်များ၌ မိုမိုတာရိုကဲ့သို့သော သူရဲကောင်းများသည် နတ်ဆိုးများ၊ ဘီလူးသဘက်မျညးထံမှ အမျိုးသမီးများကို ကယ်ဆယ်သည်။ အမျိုးသား သူရဲကောင်းများအကြောင်းပါဝင်မှုများပြားသော်လည်း အမျိုးသမီးသူရဲကောင်းများကိုလည်း ဖော်ပြထားမှုရှိ၏ ။ ယာမာတို တာကဲရု၏ ဇနီး 'အိုတိုတာချီဘာနာ'သည် သူမအမျိုးသား၏ လှေကိုကယ်ဆယ်ရန် သူမကိုယ်သူမ ပင်လယ်ထဲသို့ ခုန်ချခဲ့ရာ ခြိမ်းချောက်နေသော မုန်တိုင်းဧ အမျက်ဒေါသကို ပြေလျော့စေခဲ့သည်။ ယာမာတို တာကဲရုသည် သူမအတွက် အုတ်ဂူတစ်ခုတည်ပေးခဲ့ကာ ဇနီးသည်အတွက် ၎င်း၏ငိုကြွေးသံများသည် အရှေ့ကျွန်းဟုခေါ်သော (အဇူမာ) ဟွန်ရှူးကျွန်း ဖြစ်စေခဲ့သည်။.
↑ ၁.၀၀ ၁.၀၁ ၁.၀၂ ၁.၀၃ ၁.၀၄ ၁.၀၅ ၁.၀၆ ၁.၀၇ ၁.၀၈ ၁.၀၉ ၁.၁၀ ၁.၁၁ ၁.၁၂ ၁.၁၃ ၁.၁၄ ၁.၁၅ ၁.၁၆ ၁.၁၇ ၁.၁၈ ၁.၁၉ ၁.၂၀ ၁.၂၁ ၁.၂၂ ၁.၂၃ ၁.၂၄ ၁.၂၅ ၁.၂၆ ၁.၂၇ ၁.၂၈ ၁.၂၉ ၁.၃၀ ၁.၃၁ ၁.၃၂ ၁.၃၃ ၁.၃၄ ၁.၃၅ ၁.၃၆ ၁.၃၇ ၁.၃၈ ၁.၃၉ ၁.၄၀ ၁.၄၁ ၁.၄၂ Piggott, Juliet.. Japanese mythology, New revised, 6–8. ISBN 0-911745-09-2. OCLC 9971207။
↑ ၈.၀ ၈.၁ ၈.၂ ၈.၃ ၈.၄ ၈.၅ ၈.၆ ၈.၇ Duthie, Torquil (2014-01-01). "Preliminary Material", Man'yōshū and the Imperial Imagination in Early Japan. BRILL. doi:10.1163/9789004264540_001. ISBN 978-90-04-26454-0။
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ ၉.၄ ၉.၅ ၉.၆ ၉.၇ Lewis, Scott (2018). Mythology: Mega Collection (in en). Scott Lewis။
↑ ၁၀.၀၀ ၁၀.၀၁ ၁၀.၀၂ ၁၀.၀၃ ၁၀.၀၄ ၁၀.၀၅ ၁၀.၀၆ ၁၀.၀၇ ၁၀.၀၈ ၁၀.၀၉ ၁၀.၁၀ ၁၀.၁၁ ၁၀.၁၂ ၁၀.၁၃ ၁၀.၁၄ ၁၀.၁၅ ၁၀.၁၆ ၁၀.၁၇ ၁၀.၁၈ (2015) Great Mythologies of the World (in en). The Great Courses, 250–350။
↑ Pauley, Daniel C. (2009). Pauley's guide :adictionary of Japanese martial arts and culture. Anaguma Seizan Publications. OCLC 384268610။
↑ Louis-Frédéric, 1923- (2002). Japan encyclopedia, Roth, Käthe., Cambridge, Mass.: Belknap Press of Harvard University Press. ISBN 0-674-00770-0. OCLC 48943301။
↑ Seagrave, Sterling. (2001). The Yamato dynasty : the secret history of Japan's imperial family, Seagrave, Peggy., 1st Broadway books trade pbk., New York: Broadway Books. ISBN 0-7679-0497-4. OCLC 47813347။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဂျပန်ဒဏ္ဍာရီ&oldid=522093" မှ ရယူရန်
၃၀ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၈:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၃၀ ဇွန် ၂၀၂၀၊ ၀၈:၂၈ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။